Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Harry Maguire Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; “Nwoke Nwere Obi Ike”.
Anyị Harry Maguire Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ogologo ụkwụ ya na nnukwu 6 ′ 4 ', mana ole na ole na-ele Harry Maguire's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Harry Maguire Child Story - Ndụ Mmalite:
A mụrụ Jacob Harry Maguire n'ụbọchị 5th nke Machị 1993, na Sheffield, United Kingdom n'ime ezinụlọ Roman Katọlik.
Akụkọ nwata Harry Maguire bụ ihe na -atọ ụtọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe a na -ahụkarị - Anyị na -enye gị akụkọ banyere onye na -arọ nrọ nke ghọrọ onye nwere onyinye pụrụ iche, onye na -akwụsịbeghị olileanya ya nke ịbụ onye egwuregwu bọọlụ.
He nwere mkpebi siri ike ime ka nrọ ya mezuo ma ebumnobi ya abụghị naanị ihe na-agafe agafe.
N'ịlaghachi azụ na ngwụcha 90s, Maguire na -abịakarị n'ụlọ ya na eriri ya na -agbanwe agbanwe na akwa ụlọ akwụkwọ isi awọ kpuchie na apịtị.
Kama ịdị ọcha, ọ ga -aga n'ogige ma ọ bụ n'ubi 'greenfield' na mpụga ụlọ ya dị na Chapel Street na Mosborough na bọọlụ n'ụkwụ ya maka asọmpi ịgba bọl akpọrọ "Ụbọchị ndị Ọrụ".
Ebe egwuregwu ụlọ akwụkwọ, mpaghara greenfield na 'Ụbọchị ndị Ọrụ' asọmpi nke nwanne ya nwoke Joe (otu afọ okenye na ọkara nke ọkachamara na Buxton dị ka n'oge edere) na-egwuri egwu n'akụkụ ya, ka nwere ọnọdụ pụrụ iche n'obi ya.
N'elu bụ foto Harry (nọ n'ahịrị nke abụọ site n'aka ekpe) mụ na nwanne Joe n'oge otu asọmpi bọọlụ bọọlụ nwa praịl Katọlik nke ụbọchị Immbọchị Mee.
Ngwa ngwa ngwa na Brunsmeer Athletic dugara ya na Barnsley na Sheffield United. N'ime oge klọb ndị ntorobịa ya, Harry nwere ihu ọma ka ya na ndị egwuregwu dịka Kyle Walker, John nkume na Jake Livermore.
Ọ bụ nwata nwoke nke gafere n'ọkwa nkewa. Ọ dị mkpa ikwupụta na ọkara ụkwụ ya nke 6-inch 4-inch sitere na ntorobịa, nke a jikọtara ya na ntozu oke maka afọ ndụ ya.
Mgbe ọ bụ nwata, Harry nwere ọkwa dị larịị. O were ihe ọ bụla n'ụzọ ya, ọ nweghịkwa ihe mere ya.
N'okwu ya ..."Ihe kpatara na enwere m ahụ iru ala na bọl bụ na mgbe m bụ nwata, m na-egwuri egwu n'etiti etiti ruo mgbe m bụ 16-18 nke gosipụtara oge m nwere 6 ′ 4" elu.
Nke a bụ oge m mechara gwuo egwuregwu etiti n'ihi na m na-abụkarị onye kacha ibu, chubbiest na nke kachasị elu n'ọhịa. "
Ọzọkwa, Harry lere anya John Terry na Rio Ferdinand. Ha dị ezigbo mma na bọọlụ ma nwee ike ibute bọl ahụ site n'azụ. Dị ka Harry si etinye ya; Ha bụ ndị kacha emekọrịta ihe mgbe m na-etolite. ”
Maguire mezuru nrọ nwata ya na-etolite na Sheffield ma na-esite na usoro ntorobịa na Sheffield United tupu m gụchaa ndị otu mbụ.
N'oge ya na ndị otu egwuregwu, Maguire tinyere aka na mpempe akwụkwọ 15 dị ọcha n'oge ọfụma 11/12 na-aga nke ọma Sheffield United. Omume ya mere ka Player Player nke Season na Player Player nke onyinye Oge.
Maguire gara n'ihu merie Player Player nke Oge na Bramall Lane na 2012/13 na 2013/14. E tinyekwara ya na PFA League One Team of the Year maka oge atọ na -agba ọsọ.
Nke a mere ka nde £ 2.5 kwaga Hull City. Olileanya ya maka ịkpọ oku England bịara mgbe ọ bịanyere aka na klọb Premier League Leicester City. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Fern Hawkins na Harry Maguire - Akụkọ Lovehụnanya:
Nnukwu onye na-agbachitere etiti, 25, nọ na mmekọrịta nwa oge Sheffield, Fern Hawkins sere n'okpuru.
Fern na Harry anọkọala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ asaa kemgbe ọ na-ede Bio. Harry abụwo onye inyeaka ego na agụmakwụkwọ ya nke gosipụtara nke ọma ka ọ gụsịrị akwụkwọ na nsọpụrụ.
Fern na-etinye eserese oge niile na Instagram, na-egosi ha abụọ.
Ndụ Harry Maguire:
Harry si na mmalite dị ala, nwee ezi ezinụlọ sitere na etiti ụlọ. Amachaghị banyere nna ya n'adịghị ka mama ya bụ onye ọtụtụ ndị kwenyere na ọ bụ onye na-adọ aka ná ntị.
Banyere Harry Maguire Papa:
Nna Harry Maguire bụbu onye egwuregwu bọọlụ na ihe kpatara Harry ji egwuri egwu na Brunsmeer nke mere na ọ bụ ụlọ klọb nna ya. Dị ka Harry si etinye ya…“Ọ bụ ya mere mụ na nwanne m ji bịarute ebe a, anyị abụọ gụrụ egwu n'otu ọgbọ”
Banyere Harry Maguire Nne:
Harry Maguire rutere na mmiri ọkụ ya na nne ya maka etu o siri gbanwee maka ọgbakọ England mbụ ya.
N'ọgbọ ebe ọtụtụ ndị egwuregwu kacha mma na-eji akpa ndị nrụpụta, nwa nwoke ọhụrụ nke England Maguire malitere ịrịa site na ịbịarute n'ọdụ egwuregwu otu mba na-ebu ụfọdụ ngwa ya n'ime akpa akpa dị egwu..
A hapụrụ ya na ebere ndị na -akpa ọchị soshal midia nke na -achị ọchị na Ọ dị ka nwa akwụkwọ na-atụgharị n'ụlọ nzukọ mahadum ya n'oge izu Freshers.
Na agbachitere ya, Harry Maguire buru ụzọ dozie ihe ya na nne ya site n'ikwu…“Ọ dị ihe dịka mmadụ iri n’ime anyị ji obere akpa bute ya, ọ bụ naanị m bụ onye enwetara na igwefoto ma ndị ọzọ apụtaghị obere n’ihi na m ga-abụ nwata ọhụụ”
Akụkọ kwuru na ọ bụ Jamie Vardy buru ụzọ jiri akpa ọnụnọ weta akpụkpọ ụkwụ ya na ndị nche ya.
"M jụrụ Vards (Jamie Vardy) ihe o wetara akpụkpọ ụkwụ ya ma na-enwu n'ime ya na ọ bụ ya kwuru akpa akpa m wee were okwu ya." Maguire na egwuregwu bọọlụ nke ọzọ ya na ndị otu egwuregwu mba ahụ meziri ka mma ya banyere akpa akpa.
Mgbe o mechara onwe ya, Onye na-agbachitere ụwa zara site n'ikwu… “Akpa akpa jupụtara na akpụkpọ ụkwụ m, paịads na ihe ndị ruru unyi, nke m ga-enye onye ahụ. Ihe dị mkpa bụ na m na-anwa ike m niile iji zọtọ ​​ụkwụ m n'ala, na-adị umeala ma na-ahapụ ikike m ọ bụghị akpa nkata. ”
Brothersmụnne Maguire, Joe na Laurence, bụkwa ndị na-agba bọọlụ. A mụrụ Laurence Henry Maguire 8th nke February 1997 (afọ 4 tọrọ nwanne ya nwoke, Harry). Joe, 27 dị ka n'oge ederede (afọ abụọ karịa Harry) na-egwuri egwu na ndị na-abụghị ndị otu (Boston United). Harry dị ezigbo nso na ụmụnne ya, nne na nna.
Harry Maguire Untold Biography Eziokwu - The Walcott ọgụ:
Ruo na mismatches na-aga, nke a bụ n'ezie n'ebe ahụ. Theo Walcott bụ akwụkwọ edemede egwuregwu nke nwoke na-enweghị ihe ọ bụla. A wuru Harry Maguire nke Hull City dị ka ụlọ ụlọ brik abụọ jikọtara ọnụ. Ọ bụghị ọgụ ziri ezi na akwụkwọ onye ọ bụla.
Mana nke ahụ akwụsịghị nnukwu dimkpa Walcott na -egwuri egwu nwoke ahụ siri ike ma na -agbachitere onye na -agbachitere ya dị elu.
Ọ bụ n'ezie Theo onye malitere ya mgbe ọ kpaliri Maguire wee pụọ iche mgbe nnukwu nwoke ahụ laghachiri azụ. Obi dị m ụtọ na a zọpụtara Walcott nchekwa ozugbo ka onye na -ese ihe na -abata iji zere TKO na -egbu egbu.
Harry Maguire Eziokwu nke Onwe:
Ike: Maguire bụ ọmịiko, nka, nghọta, obi dị nwayọ, maara ihe ma mgbe ụfọdụ, egwu.
Ajọ: Maguire nwere ike na-atụ egwu n'agbanyeghị nnukwu ọhụụ ya. N'ikwu ya nkea, o nwere ike ịtụkwasị obi kpamkpam, mwute ma nwee ọchịchọ ịgbanahụ eziokwu.
Ihe Maguire na-amasị: Ọ na-enwe mmasị ihi ụra.
Ihe Maguire achọghị: Ndị na-azọrọ na ha maara-ihe niile, na-akatọ, oge gara aga na-alọghachi na ịkpa oke na ụdị obi ọjọọ ọ bụla.
Na nchịkọta, Harry Maguire nwere ezigbo enyi, Ọ hụrụ onwe ya na ndị ọrụ dị iche iche. Harry enweghị ọdịmma onwe ya ma na-adị njikere mgbe nile inyere ndị ọzọ aka, n'atụghị anya inweta ihe ọ bụla.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Harry Maguire Childhood akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.